BOENY SY BETSIBOKA : Mikarakara ny fambolen-kazo sahady ny tontolo iainana
Nanome fanofanana ho an’ireo mpiasan’ny mpisehatra amin’ny tontolo iainana Boeny ny plate forme FDDSA (femmes développement durable et sécurité alimentaire). 26 novembre 2020
Mikasika ny fametrahana ‘pepinières’ na zanakazo ny fanofanana izay niarahana ihany koa tamin’ny sampan-draharaham-paritry ny tontolo iainana sy fampandrosoana lovain-jafy eto Boeny sy Betsiboka. Manomboka amin’ny famafazana ny voa izany ka hatramin’ny fametrahana azy ireo anatin’ny haron-kely hitsiriany sy hahafahana mitondra azy. Nisy ny fampiharana ny fanofanana azo tany Marohogo, tanin’ny Minisiteran’ny tontolo iainana natao fambolen-kazo izay mirefy 18 000 ha.
Tao Tsianaloka no nanaovana izany. Tsianaloka izay midika fa tsy misy aloka satria teo aloha dia tsy nisy na hazo iray io toerana io. Telo taona taty aoriana dia vita voly hazo ny 2000ha. Efa taona maro no nisy ny fambolen-kazo teto Madagasikara saingy nijanona ho fandevenan-kazo ihany izany hatrizay. Maty nyankamaroan’ireo hazo nambolena.
Tato aoriana dia nisy ny fikojakojana, fiavana ny fototry ny hazo nambolena sy fanasiana ahitra ‘paillage’ hitazona ny hamandoana sy hiarovana ny tany tsy ho main’ny masoandro haingana. Nisy ihany koa ny fanaovana tatamôtro. Ny zava-misy anefa dia may ny 80%-n’ny hazo nambolen’ny mponin’i Mahajanga tamin’iny taona lasa iny. Midika izany fa misy ezaka tokony hatao amin’ny fisorohana ny afo tsy handoro ireo zanakazo vao voavoly.